မန်​စီးတီးနဲ့ လီ​ဗာပူးတို့ကို မှီဖို့အတွက်​ ယူနိုက်​တက်​တို့ အချိန်​ ဘယ်​​လောက်​ ယူရမလဲဆိုတာ ​ပြောပြလိုက်​တဲ့ ​ရော်​ဘီဆား​ဗေ့ခ်ျ​ - SPORTS MYANMAR
မန်​စီးတီးနဲ့ လီ​ဗာပူးတို့ကို မှီဖို့အတွက်​ ယူနိုက်​တက်​တို့ အချိန်​ ဘယ်​​လောက်​ ယူရမလဲဆိုတာ ​ပြောပြလိုက်​တဲ့ ​ရော်​ဘီဆား​ဗေ့ခ်ျ​
မန်​ချက်​စတာ ယူနိုက်​တက်​ အသင်း အ​နေနဲ့ အ​ကောင်း​ဆုံး အ​နေအထားကို ပြန်​လည်​ ​ရောက်​ရှိရန်​ ​နောက်​ထပ်​ အ​ပြောင်းအ​ရွေ့ ငါးခု ​ခြောက်​ခု​လောက်​ လိုအုံးမယ့်​ အပြင်​ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို စိန်​​ခေါ် နိုင်​ဖို့အတွက်​ အိုလီဂန်​နာဆိုရှား အ​နေနဲ့ ​အနည်းဆုံး အချိန်​ ငါးနှစ်​​လောက်​ ယူရအုံးမယ်​လို့ ​ရော်​ဘီဆားေ​ဗ့ခ်ျ​ က ​ပြောသွား ခဲ့ပါတယ်​။ လက်​ရှိ အ​ခြေအ​နေ အရ က​တော့ မန်​ယူနိုက်​တက်​ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို လက်​လှမ်းမှီဖို့ ​ဝေး​နေ ​သေးတယ်​လို့ ဆားေ​ဗ့ခ်ျ​က ယူဆ ထားပါ​တယ်​။
အိုလီဂန်​နာဆိုရှား ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ​နွေရာသီက ဒန်​ရီရယ်​ဂျိမ်း ၊ ဟယ်​ရီမက်​ဂွိုင်းယား နဲ့ ဝမ်​ဘစ်​ဆာကာ တို့ကို ​ခေါ်ယူ ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ဟာ ဒီရာသီ ကလပ်​ရဲ့ စွမ်း​ဆောင်​ရည်​ အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမား​တွေ ဖြစ်​​နေ ပါတယ်​။ ဆက်​လက်​ပြီး ဘလက်​ဘန်း နဲ့ ဒါဘီ​ကောင်​တီ ကစားသမား​ဟောင်းက ယူနိုက်​တက်​ ပရိတ်​သတ်​​တွေ အ​နေနဲ့ လက်​ရှိ မန်​​နေဂျာ အိုလီဂန်​နာဆိုရှား အ​ပေါ် စိတ်​ရှည်​သည်းခံ ​ပေးရန်​ ​တောင်းဆိုလိုက်​ပြီး အ​ကြောင်းရင်း က​တော့ လက်​ရှိ လူစာရင်း အရ ကမ္ဘာ​ပေါ်က ဘယ်​နည်းပြ မ​ဆို ဒီရာထူးကို ဆက်​ခံရင်​ ရုန်းကန်​ ရလိမ့်​မယ်​လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
ဆားေ​ဗ့ခ်ျ​က “​နောက်​ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပြိုင်​ပွဲစုံ ၁၉ ပွဲမှာ နိုင်​ပွဲ ၅ ပွဲသာ ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ပြီးခဲ့တဲ့ ​ဖေ​ဖေါ်ဝါရီ ​နောက်​ပိုင်း အ​ဝေးကွင်းမှာ အနိုင်​ မရခဲ့ပါဘူး။ အိုလီ ယူနိုက်​တက်​ နည်းပြ ဖြစ်​လာ ခဲ့ပြီး​နောက်​ပိုင်း သူတို့ရဲ့ form အရ ရမှတ်​ ၁၆ မှတ်​နဲ့ အဆင့်​ ၁၃ ​နေရာမှာ ရှိ​နေ မှာပါ။ ဒီလိုသာ ​ပြော​နေ​ပေမယ့်​ အိုလီကို နည်းပြ အဖြစ်​ ဆက်​လက်​ တာဝန်​ ​ပေးသင့်​ပါတယ်​။ သူ့အတွက်​ အချိန်​ လိုပါတယ်​။ မန်​ချက်​စတာ ယူနိုက်​တက်​ အသင်းဟာ နည်းပြ ​ပြောင်းလိုက်​တာနဲ့ ခဏ​လေး အတွင်းမှာပဲ ​ပြောင်းလဲသွားမယ့်​ အသင်း မဟုတ်​လို့ပါ​။
သူဟာ အ​ပြောင်းအ​ရွေ့ ​ဈေးကွက်​ကို တစ်​ကြိမ်​သာ ရထား ခဲ့ပါတယ်​။ အခြား မန်​​နေဂျာ​တွေ တုန်းက အများကြီး ရခဲ့ ကြပါတယ်​။ ဖာဂူဆန်​ ထွက်​ခွာ သွားခဲ့ပြီး ​နောက်​ပိုင်း ဒီအသင်းဟာ ကစားသမား ​ခေါ်ယူမှု အတွက်​ ​ပေါင်​ သန်း ၈၀၀ ​ကျော်​ အသုံးပြု ထားခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော်​ ​ပြောချင်​တာက ဒီအသင်းရဲ့ ကစားသမား တစ်​ဦး နှစ်​ဦး​လောက်​သာ လီ​ဗာပူး ဒါမှမဟုတ်​ မန်​စီးတီး ရဲ့ ပွဲထွက်​ ကစားသမား စာရင်းနဲ့ နီးစပ်​မှု​ ရှိပါတယ်​ ။
ဒါဟာ အိုလီ ​ဖြေရှင်း ​နေရတဲ့ ပြသနာပါ။ သူ ဝယ်​ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၃ဦး ဖြစ်​တဲ့ မက်​ဂွိုင်းယား ၊ ဂျိမ်းစ်​ ၊ ဘစ်​ဆာကာ တို့ဟာ ဒီရာသီ ယူနိုက်​တက်​ ရဲ့ စွမ်း​ဆောင်​ရည်​ အ​ကောင်းဆုံး ကစာသမား​တွေ ဖြစ်​ပါတယ်​။ သူဘယ်​သူလဲ? ဘယ်​လို မန်​​နေဂျာလဲ? ဆိုတာ ကျွန်​​တော်​ ဂရု မစိုက်​ပါဘူး။ ဒီလူစာရင်းနဲ့ က​တော့ အ​ကောင်းဆုံး အ​နေအထား ကို ပြန်​​ရောက်​ နိုင်​မှာ မဟုတ်​ပါဘူး။ ကျွန်​​တော်​ က​တော့ သူ့အ​နေနဲ့ အ​ပြောင်းအ​ရွေ့ ​ဈေးကွက်​ ငါးခု ​ခြောက်​ခု​လောက်​ လိုအပ်​တယ်​လို့ ထင်​ပါတယ်​။ ယူနိုက်​တက်​ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ပြန်​လည်​ စိန်​​ခေါ် နိုင်​ဖို့်အတွက်​ ​အနည်းဆုံး ငါးနှစ်​​လောက်​ လိုပါ​သေးတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​ အိုလီကိုသာ နည်းပြ အဖြစ်​ ဆက်​ခန့်​ထား လိုက်​ပါ။ သူတို့ အမှတ်​​ပေးဖလား ကို ပြန်​လည်​ စိန်​​ခေါ် နိုင်​ဖို့အတွက်​ အချိန်​တစ်​ခု​တော့ ယူရပါမယ်​။” လို့ ​ပြောသွားပါတယ်​။
ယူနိုက်​တက်​ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂ​နွေ​နေ့က ဝက်​ဟမ်းကို ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်​ သွားခဲ့တာ​ကြောင့်​ ဒီရာသီ နိုင်​ပွဲ ၂ ပွဲသာ ရထား ​သေးပြီး အမှတ်​​ပေးဇယား ရဲ့ အဆင့်​ ရှစ်​​နေရာ ​ရောက်​​နေတဲ့ အထိ ပုံစံ​ကောင်း ​ပျောက်​​နေပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ယူနိုက်​တက်​ ဟာ မ​နေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ EFL ဖလား တတိယ အဆင့်​ ပွဲစဉ်​မှာ ရို့ခ်ျ​ဒယ်​လီ အသင်းကို ပင်​နယ်​တီ အဆုံးအဖြတ်​ နဲ့ အနိုင်​ယူကာ စတုတ္ထအဆင့်​ ကို တက်​သွား ခဲ့ပြီး ချဲလ်​ဆီး နဲ့ ရင်​ဆိုင်​ ရ​တော့မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ နိုင်​ပွဲလမ်း​ကြောင်း ​ပေါ်ကို ပြန်​လည်​ ​ရောက်​လာခဲ့တဲ့ ယူနိုက်​တက်​ ဟာ လာမည့်​ တနင်္လာ​နေ့ မှာ​တော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကြီးပွဲ​ကောင်း နဲ့ Top4တစ်​​နေရာစာ အတွက်​ အာဆင်​နယ်​ အသင်းကို အိုးထရပ်​ဖို့ဒ်​မှာ လက်​ခံ ကစား သွားရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
မနျ​စီးတီးနဲ့ လီ​ဗာပူးတို့ကို မှီဖို့အတှကျ​ ယူနိုကျ​တကျ​တို့ အခြိနျ​ ဘယျ​​လောကျ​ ယူရမလဲဆိုတာ ​ပွောပွလိုကျ​တဲ့ ​ရျော​ဘီဆား​ဗခြေျ့​
မနျ​ခကျြ​စတာ ယူနိုကျ​တကျ​ အသငျး အ​နနေဲ့ အ​ကောငျး​ဆုံး အ​နအေထားကို ပွနျ​လညျ​ ​ရောကျ​ရှိရနျ​ ​နောကျ​ထပျ​ အ​ပွောငျးအ​ရှေ့ ငါးခု ​ခွောကျ​ခု​လောကျ​ လိုအုံးမယျ့​ အပွငျ​ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကို စိနျ​​ချေါ နိုငျ​ဖို့အတှကျ​ အိုလီဂနျ​နာဆိုရှား အ​နနေဲ့ ​အနညျးဆုံး အခြိနျ​ ငါးနှဈ​​လောကျ​ ယူရအုံးမယျ​လို့ ​ရျော​ဘီဆားေ​ဗ့ချြ​ က ​ပွောသှား ခဲ့ပါတယျ​။ လကျ​ရှိ အ​ခွအေ​နေ အရ က​တော့ မနျ​ယူနိုကျ​တကျ​ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကို လကျ​လှမျးမှီဖို့ ​ဝေး​နေ ​သေးတယျ​လို့ ဆားေ​ဗ့ချြ​က ယူဆ ထားပါ​တယျ​။
အိုလီဂနျ​နာဆိုရှား ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ​နှရောသီက ဒနျ​ရီရယျ​ဂြိမျး ၊ ဟယျ​ရီမကျ​ဂှိုငျးယား နဲ့ ဝမျ​ဘဈ​ဆာကာ တို့ကို ​ချေါယူ ခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ဟာ ဒီရာသီ ကလပျ​ရဲ့ စှမျး​ဆောငျ​ရညျ​ အ​ကောငျးဆုံး ကစားသမား​တှေ ဖွဈ​​နေ ပါတယျ​။ ဆကျ​လကျ​ပွီး ဘလကျ​ဘနျး နဲ့ ဒါဘီ​ကောငျ​တီ ကစားသမား​ဟောငျးက ယူနိုကျ​တကျ​ ပရိတျ​သတျ​​တှေ အ​နနေဲ့ လကျ​ရှိ မနျ​​နဂြော အိုလီဂနျ​နာဆိုရှား အ​ပျေါ စိတျ​ရှညျ​သညျးခံ ​ပေးရနျ​ ​တောငျးဆိုလိုကျ​ပွီး အ​ကွောငျးရငျး က​တော့ လကျ​ရှိ လူစာရငျး အရ ကမ်ဘာ​ပျေါက ဘယျ​နညျးပွ မ​ဆို ဒီရာထူးကို ဆကျ​ခံရငျ​ ရုနျးကနျ​ ရလိမျ့​မယျ​လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
ဆားေ​ဗ့ချြ​က “​နောကျ​ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပွိုငျ​ပှဲစုံ ၁၉ ပှဲမှာ နိုငျ​ပှဲ ၅ ပှဲသာ ရှိခဲ့ပါတယျ​။ ပွီးခဲ့တဲ့ ​ဖေ​ဖျေါဝါရီ ​နောကျ​ပိုငျး အ​ဝေးကှငျးမှာ အနိုငျ​ မရခဲ့ပါဘူး။ အိုလီ ယူနိုကျ​တကျ​ နညျးပွ ဖွဈ​လာ ခဲ့ပွီး​နောကျ​ပိုငျး သူတို့ရဲ့ form အရ ရမှတျ​ ၁၆ မှတျ​နဲ့ အဆငျ့​ ၁၃ ​နရောမှာ ရှိ​နေ မှာပါ။ ဒီလိုသာ ​ပွော​နေ​ပမေယျ့​ အိုလီကို နညျးပွ အဖွဈ​ ဆကျ​လကျ​ တာဝနျ​ ​ပေးသငျ့​ပါတယျ​။ သူ့အတှကျ​ အခြိနျ​ လိုပါတယျ​။ မနျ​ခကျြ​စတာ ယူနိုကျ​တကျ​ အသငျးဟာ နညျးပွ ​ပွောငျးလိုကျ​တာနဲ့ ခဏ​လေး အတှငျးမှာပဲ ​ပွောငျးလဲသှားမယျ့​ အသငျး မဟုတျ​လို့ပါ​။
သူဟာ အ​ပွောငျးအ​ရှေ့ ​စြေးကှကျ​ကို တဈ​ကွိမျ​သာ ရထား ခဲ့ပါတယျ​။ အခွား မနျ​​နဂြော​တှေ တုနျးက အမြားကွီး ရခဲ့ ကွပါတယျ​။ ဖာဂူဆနျ​ ထှကျ​ခှာ သှားခဲ့ပွီး ​နောကျ​ပိုငျး ဒီအသငျးဟာ ကစားသမား ​ချေါယူမှု အတှကျ​ ​ပေါငျ​ သနျး ၈၀၀ ​ကြျော​ အသုံးပွု ထားခဲ့ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ ကြှနျ​​တျော​ ​ပွောခငျြ​တာက ဒီအသငျးရဲ့ ကစားသမား တဈ​ဦး နှဈ​ဦး​လောကျ​သာ လီ​ဗာပူး ဒါမှမဟုတျ​ မနျ​စီးတီး ရဲ့ ပှဲထှကျ​ ကစားသမား စာရငျးနဲ့ နီးစပျ​မှု​ ရှိပါတယျ​ ။
ဒါဟာ အိုလီ ​ဖွရှေငျး ​နရေတဲ့ ပွသနာပါ။ သူ ဝယျ​ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၃ဦး ဖွဈ​တဲ့ မကျ​ဂှိုငျးယား ၊ ဂြိမျးဈ​ ၊ ဘဈ​ဆာကာ တို့ဟာ ဒီရာသီ ယူနိုကျ​တကျ​ ရဲ့ စှမျး​ဆောငျ​ရညျ​ အ​ကောငျးဆုံး ကစာသမား​တှေ ဖွဈ​ပါတယျ​။ သူဘယျ​သူလဲ? ဘယျ​လို မနျ​​နဂြောလဲ? ဆိုတာ ကြှနျ​​တျော​ ဂရု မစိုကျ​ပါဘူး။ ဒီလူစာရငျးနဲ့ က​တော့ အ​ကောငျးဆုံး အ​နအေထား ကို ပွနျ​​ရောကျ​ နိုငျ​မှာ မဟုတျ​ပါဘူး။ ကြှနျ​​တျော​ က​တော့ သူ့အ​နနေဲ့ အ​ပွောငျးအ​ရှေ့ ​စြေးကှကျ​ ငါးခု ​ခွောကျ​ခု​လောကျ​ လိုအပျ​တယျ​လို့ ထငျ​ပါတယျ​။ ယူနိုကျ​တကျ​ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကို ပွနျ​လညျ​ စိနျ​​ချေါ နိုငျ​ဖိျု့အတှကျ​ ​အနညျးဆုံး ငါးနှဈ​​လောကျ​ လိုပါ​သေးတယျ​။ ဒါ့​ကွောငျ့​ အိုလီကိုသာ နညျးပွ အဖွဈ​ ဆကျ​ခနျ့​ထား လိုကျ​ပါ။ သူတို့ အမှတျ​​ပေးဖလား ကို ပွနျ​လညျ​ စိနျ​​ချေါ နိုငျ​ဖို့အတှကျ​ အခြိနျ​တဈ​ခု​တော့ ယူရပါမယျ​။” လို့ ​ပွောသှားပါတယျ​။
ယူနိုကျ​တကျ​ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂ​နှေ​နကေ့ ဝကျ​ဟမျးကို ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမျ့​ သှားခဲ့တာ​ကွောငျ့​ ဒီရာသီ နိုငျ​ပှဲ ၂ ပှဲသာ ရထား ​သေးပွီး အမှတျ​​ပေးဇယား ရဲ့ အဆငျ့​ ရှဈ​​နရော ​ရောကျ​​နတေဲ့ အထိ ပုံစံ​ကောငျး ​ပြောကျ​​နပေါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ ယူနိုကျ​တကျ​ ဟာ မ​နညေ့က ကစားခဲ့တဲ့ EFL ဖလား တတိယ အဆငျ့​ ပှဲစဉျ​မှာ ရို့ချြ​ဒယျ​လီ အသငျးကို ပငျ​နယျ​တီ အဆုံးအဖွတျ​ နဲ့ အနိုငျ​ယူကာ စတုတ်ထအဆငျ့​ ကို တကျ​သှား ခဲ့ပွီး ခြဲလျ​ဆီး နဲ့ ရငျ​ဆိုငျ​ ရ​တော့မှာ ဖွဈ​ပါတယျ​။ နိုငျ​ပှဲလမျး​ကွောငျး ​ပျေါကို ပွနျ​လညျ​ ​ရောကျ​လာခဲ့တဲ့ ယူနိုကျ​တကျ​ ဟာ လာမညျ့​ တနင်ျလာ​နေ့ မှာ​တော့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲကွီးပှဲ​ကောငျး နဲ့ Top4တဈ​​နရောစာ အတှကျ​ အာဆငျ​နယျ​ အသငျးကို အိုးထရပျ​ဖို့ဒျ​မှာ လကျ​ခံ ကစား သှားရမှာ ဖွဈ​ပါတယျ​။